Kiiska Wadashaqeynta - Dongguan Taiyang Almulaha Kiimikada Kiimikada Co., Ltd.
Weiqiao Pioneering Group waxaa nagala gaadhay iskaashi
Weiqiao Pioneering waxay nagala timid iskaashi annaga oo amareyna qayb fara badan oo alaab ah oo ka mid ah shirkaddayada si loo helo iskaashi wanaagsan oo ay ku guuleystaan ​​qancinta macaamiisha. Shandong weiqiao horudhaca kooxda co., Ltd. waxay ku taalaa gobolka zouping, gobolka shandong, waxay ku taal aagga buurta shandong taiyi iyo jaalaha buluugga ah ee waqooyiga shandong iskuxirka, magaalada warshadaha ee bariga zibo, Galbeedka waa jinni , caasimada gobolka shandong. koonfurta tareenka jiaoji, woqooyi wabiga wabiga ah, 26 kiiloomitir jiqing waddo weyn oo dhan, 62 kiiloomitir masaafada caalamiga ah ee Jinan, ku habboonaanta, jagada juquraafi ahaan. Weiqiao group waa shirkad balaaran oo baaxad weyn oo balaaran oo inta badan ku howlan wershadaha dharka, waxaana kujira 11 shirkadood iyo 1 shirkad wadaag ah. Meheradeeda ugu waaweyni waa lafdhabarta iyo wax karsiga, daabacaadda iyo rinjiga, jumladda iyo tafaariiqda dharka, soo dejinta iyo dhoofinta, iwm.
Beijiang dhar wuxuu gaadhay wada shaqeyn
Dharka Beijiang wuxuu nagala shaqeeyey annaga, Maaddaama shirkaddu ay si adag u maareyso tayada badeecaddeeda, Taiyang Textle Auxliaries waxay ku gaadhay sumcad iyo sumcad gaar ah Warshadaha, waxayna ku guuleysteen bogaadin adeegsadayaasha inta badan gobollada dalka iyo qeybo ka mid ah dalka. , Bejiang Dharka ayaa madax ka ah magaalada Shaoguan, ee gobolka Guangdong. Warshadda Shaoguan waxa ay ka kooban tahay 320 acres, warshadda vietnam-na waxay daboolaysaa aag dhan 200 acres, Warshadda Vietnam ayaa hadda leh 480 nooc oo ka mid ah jiilkii u dambeeyay ee ITEMA R9500 denim denim rapier looms. Waxyaabaha ay soo saartaan raggu waxay ka kooban yihiin dharka jajabka ah, dharka midabada laga sameeyo, dharka midabeysan, iyo afar taxane oo dhar ah oo ku saleysan dhammaan dharka jira. Illaa 2013, wadarta iibka ayaa ka dhigan 50s iibka gudaha iyo dhoofinta.
Guangdong Dahongma Industrial Co., Ltd.rered iskaashi annaga naga dhexeeya
Guangdong Dahongma Industrial Co., Ltd. waxaa nagala gaadhay iskaashi. Maaddaama ay shirkaddu si adag u maareynayso tayada badeecooyinka, Kaabayaasha Dharka ee Taiyang waxay ku gaareen sumcad iyo sumcad gaar ah warshadaha, waxayna ku guuleysteen joogtaynta isticmaaleyaasha inta badan gobollada dalka iyo qeybo ka mid ah dalka. Amaan. Guangdong Dahongma Industrial Co., Ltd. Waxaa la aasaasay 1984, Shirkadda waxay diiradda saareysaa maalgashiga sayniska iyo tikniyoolajiyadda, soo bandhigidda qalabka, hal-abuurka teknolojiyada, tababarka shaqaalaha, iyo maareeynta adag. Waxaa la soo saaray iskaanka kombiyuutarka casriga ah ee Mareykanka iyo isku habboonaanta midabka, qalabka tijaabada otomaatiga oo dhameystiran, mashiinka dheecaanka udub dhexaadka u ah Taiwan, qubeyska mashiinka qulqulaya otomaatiga, qalabka culeyska, Talyaani sare oo qallajiye, mashiinka sawaxanka Switzerland, mashiinka wax lagu qoro, taxane soo saaris farsamo sare ah qalab, wax soo saar hal-joog ah. Alaab tayo sare leh oo ceyriin ah, midab deegaan la soo dhoobay, kontorool tayo sare leh, maareyn shabakad casri ah, ku takhasustay soo-saarka, dharka midabka, xariir, xariijinta shirkadaha warshadaha gaarka ah.
Zhongshan Yida Apparel Limited waxay naga gaadhay iskaashi
Zhongshan Yida waxay nala timid iskaashi. Zhongshan Yida Apparel Limited waa shirkad soo saareysa dharka hudheelka maalgashiga hong Kong oo hoos timaad Crystal Group, oo la asaasay bishii Diseembar 2003, iyadoo wadar ahaan ay ku baxday ku dhawaad ​​HK $ 500 milyan iyo dhul ku dhow 130,000 mitir oo laba jibaaran, waxaa lagu qalabeeyay dhisme heer casri ah oo wax soo saar casri ah. , dhisme xafiis caqli leh, iyo dhisme shaqaalaha sifiican u qalabaysan. Deegaanka cagaaran ee dhirta ayaa 30% ka ah isugeynta aagga, waxaana loo yaqaanaa warshad qaab-u-sameynta dhirta.
Shirkaddu waxay ku taalaa Shunjing Industrial Park, Banfu Town, Zhongshan City, Gobolka Guangdong, oo u dhow National Highway 105. Ku tiirsan meesha ugu sareysa juquraafi ahaan ee Zhongshan City, shirkaddu waxay ku raaxeysataa gaadiid ku habboon iyo jawi warshadeed oo qurux badan, taasoo ka dhigaysa meel wanaagsan oo loo maro shaqee oo noolaado. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira kumanaan shaqaale ah, iyo qiimaha wax soo saarka sanadlaha ah in ka badan hal bilyan yuan. Alaabtooda ayaa inta badan loo dhoofiyaa, macaamiishooduna adduunka oo dhan ayey joogaan. Shirkadda waxay had iyo jeer u hoggaansan tahay "wax soo saarka cagaaran, cilmi baarista farsamada iyo horumarinta wadada, iyo, adkeyn xoog leh oo cilmi baaris saynis ah iyo waxsoosaarka isdhaxgalka wax soo saarka, iibinta iyo baaritaanka waa jeans shirkadaha ganacsiga wax soo saarka, sanado badan ay dhoofinta Shiinaha u soo dirto Noocyada dhogorta suufka ee Mareykanka nooca nooca dhoofinta ayaa ah dalka koowaad, Shiinaha waa mid ka mid ah shirkadaha ugu badan ee dhoofinta dhoofinta lo'da.
Texhong Dharka Dharka ah ee 'Limited' Limited of Techhong wuxuu gaadhay iskaashi anaga
Shirkadda Texhong Dharka Dharka ee Xaddidan ayaa gaadhay iskaashi annaga naga dhexeeya. Shirkadda 'Texhong Dharkeenden Group Limited' (HK 2678) waxaa aasaasey sanadkii 1997 Mr. Hong Tianzhu.
Kooxda ayaa guud ahaan ku hawlan soosaaridda iyo qaybinta yarn tayo leh, dharka cawlan iyo dharka dharka, gaar ahaan qiimaha sare ee-udugga yar-yar iyo dharka suufka dharka. Hadda waa mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee iibiya dharka suufka adduunka waana shirkad hormuud ka ah ganacsiga dhar-diiradda oo diiradda saareysa soo saarista alaabooyinka dharka suufka ah ee qiimaha ku sareeya. Laga soo bilaabo 1997, Kooxda ayaa si xawli ah u kortay oo ay ku leeyihiin in ka badan 3,000 macaamiil gudaha Shiinaha iyo dibedda, iyada oo shabakadeeda iibka ay ku baahsan tahay PRC, Europe, South Korea, HongKong iyo Bangladesh. Iyada oo ay xaruntiisu tahay xarun iibgeedu aasaasay Shanghai, Kooxda waxay ka hawlgashaa 12 dhir wax-soo-saar oo ku habboon dalka Shiinaha (kana dhex jira Wabiga Yangze River Delta) waxayna saldhig ku leedahay dalka Vietnam iyada oo wadar ahaan wax soosaarkoodu ka badan yahay 2,160,000 bur-bur ah iyo 572 duqayn diyaaradeed. Iyada oo leh dhaqankeeda shirkadeed ee “Daacadnimo, Iskaashi, Hal-abuurnimo, Heer sare”, kooxdu waxay aasaastay istiraatiijiyadeeda horumarineed sida xirfadleyda, caalimka iyo caalamiyeynta. In kasta oo ay go’aansatay in ay noqoto shirkada Shiinaha ee saamaynta ku leh isla markaana horseed u noqota wershadaha dharka, Kooxda ayaa ka go'an in ay kor u qaaddo qiimaha milkiileyaasheeda, macaamiisheeda iyo in ay wax ku biiriso bulshada.